सरकारी तालिमका उपलब्धि
अन्नपूर्ण मंगलवार, कात्तिक १४, २०७४ 322 पटक पढिएको
सरकारले हरेक वर्ष तालिमको नाममा अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ । सरकारी तहबाट सञ्चालन भएका तालिम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा तालिमका नाममा भएको खर्चको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । चालू अर्थिक वर्षमा तालिममा मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । गत वर्ष छ अर्ब खर्च भएको थियो । वार्षिक अरबौंको तालिम दिइँदा पनि विदेशी श्रम बजारमा जाने नेपाली भने आजका दिनमा प्रायः अदक्ष र अर्धदक्ष छन्, जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो ।
नेपालमा उद्योगधन्दा कम भएकाले सोही कारण दैनिक हजार हाराहारीमा युवा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने गरेको सन्दर्भमा यस्ता तालिमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई लक्षित गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुँदा नेपाली कामदारको विदेशी रोजगारी दिगो त हुने नै थियो, उनीहरूको आम्दानीसमेत बढ्ने थियो । अन्ततः त्यसले राज्यलाई फाइदा पुग्ने थियो । अहिलेसम्म यस्ता तालिम सर्वसाधारणका लागि लक्षित छन् । सर्वसाधारणले तालिम लिएर आम्दानी बढाएका केही उदाहरण छन्, तर तालिमपछिका त्यस्ता उद्यम प्रायः गुजारामुखी मात्रै देखिएका छन् ।
त्यस्ता तालिम नेपाली मौलिक सीप र शैलीभन्दा पश्चिमा शैलीबाट बढी प्रभावित देखिन्छ । अंग्रेजीमै छापिएका अमेरिकन-युरोपियन तालिम ढाँचा नेपालीमा अनुवाद गरी सोहीअनुसार गर्न-गराउन लगाउँदा त्यसले चाहेअनुसारको ‘माटो सुहाउँदो’ सीप र ज्ञान नबढेको देखिन्छ । मानवीय क्षमता अभिवृद्धिभन्दा होटेल, भत्ता, परामर्श र प्रशिक्षणमा बढी खर्च गर्ने परिपाटीले पनि यस्ता तालिमका उपादेयता घटाउने गरेका छन् ।
तालिम भन्नेबित्तिकै महँगा रिसोर्ट र होटेलमा गएर चमकधमकपूर्ण कार्यक्रम गर्ने भन्ने बुझाइ छ आम सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीमा । रामरमितामै बढी पैसा सक्ने त्यस्ता तालिमले कति नै ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ला, त्यसतर्फ पनि ध्यान पुअयाउन आवश्यक छ । व्यवहारमा पनि त्यस्तै हुने गरेको छ ।
तालिमका कार्यक्रम कसलाई र किन भन्ने विषयमा पनि तालिम दिने निकायले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । हाम्रोमा विरलै त्यस्तो हुने गरेको छ । हाम्रोमा जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दलका नेताले चिनेका, तिनका आफन्त या कार्यकर्ताले मात्र ‘सरकारी तालिम’ पाउने आम प्रचलन छ र जीवनोपयोगी त्यस्ता तालिम प्राप्त गर्न निश्चित योग्यता नतोक्दासम्म त्यस्ता तालिमले लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने छैनन् ।
तालिम बेकार र निरर्थक हुन्छन् भन्ने पक्कै होइन, तर अर्बौं लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट राज्य र समाजले पनि यथोचित लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले क-कसलाई तालिम दिने, प्राप्त तालिम र सीपबाट समुदायलाई लाभान्वित बनाउन कसरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निश्चित समयका लागि उत्तरदायी बनाउने भन्नेबारे रणनीतिसमेत बनाउन आवश्यक छ । भूकम्पपछि नेपाललाई हजारौंको संख्यामा योग्य निर्माणसम्बन्धी जनशक्ति चाहिएको छ ।
तालिम दिएर तालिम लिने व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन सक्दा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि सहज रूपमा सम्पन्न हुनसक्थ्यो । अर्को कुरा, अत्यन्त न्युन आय भएका व्यक्तिको हकमा तालिमले मात्र पनि सहजै उद्यम सुरु गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थाका परिवार र व्यक्तिलाई पुँजी उपलब्ध गराउनसमेत सरकारले पर्याप्त पहल गर्नुपर्छ ।
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ शान्ति सम्झौताबाट प्रेरणा
बुधवार, मंसिर ६, २०७४ गृहमन्त्री तोक
मंगलवार, मंसिर ५, २०७४ मुटु जोगाऔं
सोमवार, मंसिर ४, २०७४ कत्ति महँगा तरकारी !
आइतवार, मंसिर ३, २०७४ खै सुरक्षा ?
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ मालाको अराजनीति
बिहीबार, कात्तिक ३०, २०७४ युवा क्रिकेटरले ल्याएको उत्साह
बुधवार, कात्तिक २९, २०७४ सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर
काठमाडौं- ५ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 6641
प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी 13454
पहिलो चरण चुनाव : आज अन्तिम प्रचार 2374
कांग्रेसले गठबन्धन अझै कस्ने 9259
चीनसँगको एउटा मात्र नाका चार दिन बन्द 1262
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 8007
निर्वाचन कार्यालयमै शक्तिशाली बम 2723
एनालग टीभी बन्द : ३० लाख ग्राहक प्रभावित 32683